Cybersex စိတ်ရင်းမေးခွန်းလွှာ (2018) ၏အချက်အလက်များဖွဲ့စည်းပုံ - သင့် ဦး နှောက်တွင် Porn
အဆိုပါဘာလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ (2018) ၏ factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2018 သြဂုတ် 29: 1-9 ။ Doi: 10.1556 / 2006.7.2018.67 ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏]
ဖရန့် E ကို1, Khazaal Y ကို1,2,3, Jasiowka K သည်2, နူ T က2, Bianchi-Demicheli က F1,2, Rothen S က1,2.
အင်တာနက်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ညစ်ညမ်းများအတွက်အသုံးများဖြစ်ပါတယ်။ Little ကလူတွေအင်တာနက်ကိုတဆင့်အစည်းအဝေးတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကရှာဘာဖြစ်လို့အကြောင်းကိုနှင့်ကျဘာစွဲများ၏ဆက်စပ်မှုအကြောင်းကိုသို့သော်လူသိများသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်ကျဘာအသုံးပြုမှုဖို့လောင်းကစားလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာကပြွီးနှင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအတည်ပြုခြင်းဖြင့် [ဘာလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ (CysexMQ)] ဘာရည်ရွယ်ချက်တွေများအတွက်မေးခွန်းလွှာဆောက်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။
191 နှင့် 204 ကျဘာသုံးစွဲသူနှစ်ဦးကိုအွန်လိုင်းနမူနာဒုတိယပေါ်ပထမဦးဆုံးနမူနာနှင့်တစ်ဦး confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (CFA) အပေါ်တစ်ဦးကျောင်းအုပ်ကြီးအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (PCA) လုပ်ဆောင်သွားရန်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ Cronbach ရဲ့αနှင့်ပေါင်းစပ်ယုံကြည်စိတ်ချရပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုအကဲဖြတ်ရန်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ CysexMQ နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory (SDI) တို့အကြားဆက်စပ်မှုကိုလည်းအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
နှစ်ဦးကိုယှဉ်ပြိုင်မော်ဒယ်များကတော့ PCA သုံးအချက်များနှင့်အတူနှစ်ခုအချက်များနှင့်တသားတများနှင့်တခြားကနေထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ CFA သုံးခု-Factor ဖြေရှင်းချက်များအတွက်ပိုကောင်းမထိုက်မတန်ပြသခဲ့သည်။ 14:; normed-မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း 0.993: သုံး Cross-တင်ပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်ပြီးနောက်ရလဒ်များကိုတစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်း 0.978-item ကိုသုံး-Factor ဖြေရှင်းချက် (တိုးမြှင့်, ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်လူမှုရေးစိတ်ရင်း) (ပြုပြင်ကောင်းမြတ်ခြင်း-of-မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်းခိုင်လုံသောခဲ့ကြောင်းပြသ ; Tucker-Lewis ကအညွှန်းကိန်း: 0.985; နှိုင်းယှဉ်ထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း: 0.988; အမြစ်အကြမ်းဖျင်း၏စတုရန်းအမှားဆိုလို: 0.076) ။ positive ဆက်စပ်မှုမတူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနှင့် SDI ၏ subscales အကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါရလဒ်များ CysexMQ ကျဘာရည်ရွယ်ချက်တွေ၏အကဲဖြတ်များအတွက်လုံလောက်သောကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
keywords: ဘာ, အကွောငျးပွသော, ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း, အင်တာနက်စွဲ, လောင်းကစားလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ
မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များနှင့်အများဆုံးလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်နေ့စဉ်အသက်တာ၌၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သုံးစွဲခြင်းအတွက်အင်တာနက်ကို၏သိသာထင်ရှားသောတိုးချဲ့သိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံကြီးပြင်းခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကိုသတင်းအချက်အလက်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပါသည်ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာ့ AIDS တဲ့အစွမ်းထက် tool ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်အကြောင်းတည်းသော်လည်း, သူကလည်းလျင်မြန်စွာလူရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အစစ်အမှန်ဘဝအကျိုးဆက်များမပါဘဲပွင့်လန်းခြင်းနှင့်ဘယ်မှာအရေးကြီးသောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အတူအချို့သောလူတွေက get ဘယ်မှာခိုလှုံရာတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်လာခဲ့ပါသည် ယင်း၏နက်နဲသောပင်လယ်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကျဘာ (သာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများရှေ့ဦးစွာ မှစ. အရာ၌နန်းထိုင်ခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်သောအငျတာနကျ၏တဦးတည်းသီးခြားအသုံးပြုမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြGmeiner, စျေး, & Worley, 2015) ။ ဘာထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်း, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလိင်ရှိုးများ, webcam, သို့မဟုတ်ချက်တင်ခန်းအဖြစ်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏အသုံးပြုမှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ (အစစ်အမှန်အသက်တာ၌လိင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အရာအားလုံးကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ကြောင်းစောဒကတက်ထားသည်Carnes, 2001).
အင်တာနက်ကိုအများအား (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်Grubbs, Volk, Exline, & Pargament, 2015), ယျြဖှငျ့ဖွံ့ဖြိုးဘဲလျက်နှစ်ခုအကြားနီးကပ် link ကို။ အဆိုပါရယူသုံးရေး, တတ်နိုင်နှင့်အင်တာနက် anonymity ကိုက virtual world လျော့နည်းအစစ်အမှန်ပုံရသည်ကျသော, ထိုကဲ့သို့သောနောက်ကွယ်မှ-The-screen ကို interaction က၏ထင်ယောင်ထင်မှားအသွင်အပြင်ရှိနေသော်ငြားလည်းထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကနှင့် disempowerment တိုက်တွန်းပါသည်။ သူတို့ကိုယ်ထိလက်ရောက်တစ်စုံတစ်ဦးထိခိုက်စေမနိုင်သည့်အခါပြည်သူ့ပိုမိုလွယ်ကူစွာ (က pernicious ဘေးကင်းခံစားမှုနှင့် disinhibition မှဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ကူးယဉ်ခွင့်ပြုYoung၊ Griffin-Shelley, Cooper, O'mara, & Buchanan, 2000).
အတော်ကြာအသုံးပြုသူများကကျဘာတစ်ဦးအပြုသဘောသက်ရောက်မှု (သတင်းပေးပို့ခဲ့ကြပေမယ့်Grov, Gillespie, Royce, & Lever, 2011), အချို့သော (ကျဘာထုတ်ကုန်တစ်ခုစွဲလမ်းအသုံးပြုမှုရှိခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရိပ်မိပါပြီBothe et al ။ , 2018; Grubbs et al ။ , 2015; Kor et al ။ , 2014) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သောအင်တာနက်စွဲခြင်း (အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးလူဦးရေရဲ့သေးငယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သိသိသာသာအချိုးအစားကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံရသည်Dufour et al ။ , 2016; Frangos, Frangos, & Sotiropoulos, 2011; Grubbs et al ။ , 2015; Kafka, 2010; Ross, Mansson, & Daneback, 2012) ။ လည်းကျဘာစွဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားအလွန်အကျွံကျဘာ၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ, (အိပ်စက်ခြင်းနေ့-to-နေ့ကအသက်တာကိုတာဝန်ဝတ္တရားအတွက်, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်နှောင့်အယှက်နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်Grubbs et al ။ , 2015; Tsimtsiou et al ။ , 2014; Twohig, Crosby, & Cox, 2009) ။ စိတ်ရင်းအမူအကျင့်စွဲလမ်း (၌ကြီးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လူသိများကြောင့်Billieux et al ။ , 2011; Clarke et al ။ , 2007; Hilgard, Engelhardt, & Bartholow, 2013; Kiraly et al ။ , 2015; Kuss, Louws, & Wiers, 2012; Zanetta Dauriat et al ။ , 2011), ဤလေ့လာမှု၏အဓိကရည်မှန်းချက်ကျဘာရည်ရွယ်ချက်တွေအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ကျဘာလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ (CysexMQ) မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြဖို့ပဲ။
ဘာစွဲ၏ခေါင်းစဉ်လက်တွေ့အရေးပါမှု၏ဖွယ်ရှိဖြစ်သော်လည်းကမရှိသလောက် (ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2011; Doring, 2009) ။ Little က (လူတွေအင်တာနက်ကိုတဆင့်အစည်းအဝေးတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကရှာဘာဖြစ်လို့အကြောင်းကိုနှင့်ကျဘာစွဲ၏ဆက်စပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်Kafka, 2010) ။ လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ပျော်မွေ့၏မြော်လင့်ကျဘာများအတွက် key ကိုရည်ရွယ်ချက်ကဖြစ်တွေးဆထားပြီးဘာစွဲ (တစ်အခန်းကဏ္ဍရှိစေခြင်းငှါလူငယ်တို့, 2008) ။ ထို့ကြောင့်အများအပြားလေ့လာမှုများထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘာစွဲရှိခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားကလူညစ်ညမ်း cue တင်ဆက်မှု (ထံမှ သာ. ကြီးမြတ် cue reactivity ကိုနှင့်လိင်စိတ်နိုးထရှိခြင်းအစီရင်ခံကြောင်းပြသကြLaier, Pawlikowski, Pekal, Schulte, & Brand, 2013).
အထူးသဖြင့်အချို့သောလေ့လာမှုများအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလူတစ် ဦး ချင်းစီကြည့်ရှုသောအခါဆိုက်ဘာဆက်ဆတ်အသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ (ဆိုလိုသည်မှာစွဲလမ်းစေခြင်း) သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2011) ။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောစွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုထိုကဲ့သို့သော dorsal anterior cingulate, ventral striatum နှင့် amygdala (အဖြစ်မူးယစ်ဆေး-cue reactivity ကိုနဲ့ဆက်စပ်အာရုံကြောဒေသများ၏မြင့်မား activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Voon et al ။ , 2014) ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုး, ဘာစွဲနှင့်အတူလူ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကဗီဒီယိုတွေကိုတုန့်ပြန် သာ. ကြီးမြတ်အလိုဆန္ဒပေမယ့်အလားတူအကြိုက်ရမှတ်ခဲ့Voon et al ။ , 2014) ။ ထိုသို့သောရလဒ်များသည်စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေအတွက်အကြံပြုမော်ဒယ်များနှင့်အညီ, "လို" ( "ကဲ့သို့" မှ dissociated ဖြစ်ကြသည်ရော်ဘင်ဆင် & Berridge, 2008).
အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်း (အပေါ်သုတေသနပြုအစီရင်ခံအဖြစ်Billieux et al ။ , 2013; Khazaal et al ။ , 2015; Zanetta Dauriat et al ။ , 2011), cybersex စွဲသည်အွန်လိုင်းလိင်ဆိုင်ရာဆက်စပ်သောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် (ဆိုလိုသည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လက်တွေ့ဘ ၀ ပြသနာများမှလွတ်မြောက်ရန်) အားဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။Laier & အမှတ်တံဆိပ်, 2014) ။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောတအကျိုးဆက်များမှတဦးတည်းနှင့်ဖြေရှင်းမှတဦးတည်း (ဆန္ဒရှိနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှလိင်၏အသုံးပြုမှု: ဥပမာ, Hypersexual အပြုအမူ Inventory, ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်အလွန်အကျွံနှင့်ပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ထားပါသည်တဲ့ Self-အစီရင်ခံမေးခွန်းလွှာသုံး subscales ပါဝင်သည် အကျိုးသက်ရောက်စေပြည်နယ်များသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်; Reid, Li, Gilliland, Stein, & Fong, 2011) ။ အဆိုပါညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု Inventory (Reid et al ။ , 2011လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိချင်စိတ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်အပျော်အပါးတို့နှင့်ဆက်စပ်သော ၁၅ ပုဒ်ပါကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်မေးခွန်းလွှာဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း၏လှုံ့ဆော်မှုကိုအောက်ပါအတိုင်းအတာများနှင့်ဆက်စပ်သော))
လယ်ပြင်၌လေ့လာမှုများ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကိုနေသော်လည်းထုတ်ဝေဆောင်းပါးများကိုဆန္ဒရှိစိတ်ခံစားမှုများနှင့်စစ်မှန်သောဘဝပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှကျဘာစွဲဆက်စပ်နှစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေစိတ်ရင်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်နှင့်အင်တာနက်-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏အသုံးပြုမှုဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုLaier & အမှတ်တံဆိပ်, 2014) ။ Unsurprisingly, အင်တာနက်ပေါ်ရှိအခြားသောအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း (Carli et al ။ , 2013; Geisel, Panneck, Stickel, Schneider, & Muller, 2015; Khazaal et al ။ , 2012), ဘာစွဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ကိုတွေ့သဖြင့်, က, သို့သော်, (အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်မခံခဲ့ရကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2011; Laier, Pekal, & Brand, 2015).
ယခင်သီအိုရီများနှင့်ကျဘာစွဲ၏လယ်ပြင်တွင်သုတေသနလုပ်ငန်းများအားဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲမည်သို့စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြပေမယ့်တစ်ဦးနှင့်အဓိပ္ပါယ်ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူကားမောင်းသည့်တွန်းအားအကြောင်းကိုချို့တဲ့နေပါတယ်။ တကယ်တော့စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုမှဦးဆောင်တွန်းအားပထမဦးဆုံး (အရက်သုံးမမှန်၏လယ်ပြင်တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြCooper, Russell, Skinner, & Windle, 1992တိုးမြှင့်, လူမှုရေးနှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း:), အရာ၌သောက်စိတ်ရင်းသုံး-Factor မော်ဒယ်ပါဝင်ယူဆခဲ့ကြသည်။ စွမ်းရည်မြှင့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုမြှင့်ရန်ပြည်တွင်းရေးနှင့်အပြုသဘောအားကောင်းဖော်ပြ။ လူမှုအချက်လူမှုရေးဆက်နွယ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ပြင်ပနှင့်အပြုသဘောအားကောင်းရန်ရည်ညွှန်းသည်။ ဖြေရှင်းအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချဖို့တစ်ဦးချင်းစီကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်အတွင်းပိုင်းမဟာဗျူဟာအပေါငျးတို့သကိုယ်စားပြုတယ်။
ဒါဟာအရက်သောက်စိတ်ရင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်တွေထိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားကျဘာအဖြစ်မူးယစ်ပစ္စည်းဥစ္စာ, မပါဘဲတစ်ဦးစွဲရန်လျှောက်ထားကြောင်းသံသယမှတရားဝင်ပုံရသည်။ သို့သော်ဤအချက်များ Stewart ကနဲ့ Zack (နေဖြင့်ကောက်ယူတဲ့လေ့လာမှုမှာဥပမာ, လောင်းကစားဝိုင်းစိတ်ရင်းများအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်သရုပ်ပြခဲ့ကြ2008) ။ သူတို့ကအချက်နှုန်းငါးပစ္စည်းများနှင့်အတူ 15 ပစ္စည်းများကို၏တူညီသော Construction ၏အခြေခံပေါ်တွင်လောင်းကစားလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ (GMQ) ၏သုံး-Factor ဖွဲ့စည်းပုံအတည်ပြု။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများအထူးသ (လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ဦးအပိုဆောင်း drive ကိုအဖြစ်ငွေကြေးဆိုင်ရာစိတ်ရင်းအပါအဝင် GMQ တစ်ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းအတည်ပြုDechant & Ellery, 2011) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် GMQ ကတိုင်းတာရန်ထင်သောစိတျရငျးဆက်စပ်ထားနိုင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာအစမေးခွန်းလွှာပလပ်စတစ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးပြုပြင်မွမ်းမံကျဘာရည်ရွယ်ချက်တွေအကဲဖြတ်ဘို့အသီးကိုသီးမည်အကြောင်းကြောင်းပြသထားတယ်။
အထူးသညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုအပေါ်ကျဘာစွဲအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများ, (အရကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2011; Laier & အမှတ်တံဆိပ်, 2014; Laier et al ။ , 2015; Reid et al ။ , 2011), က GMQ နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်အချက်များ, တိုးမြှင် (ကဆန္ဒပြည့်ကဲ့သို့ရည်ရွယ်ချက်က) ထိုနှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း hypothesize မှယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်, ဘာရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ဒါဟာအစဘာအပြုအမူအတွက်လူမှုရေးရည်ရွယ်ချက်ကများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုစဉ်းစားရန်အသိစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အပေါ်လေ့လာမှုများရင်ခုန်စရာသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့လိင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် socializing နှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ရင်း၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ (Sumter, Vandenbosch, & Ligtenberg, 2017) ။ အဆိုပါ GMQ ၏သုံး-Factor မော်ဒယ်မေးခွန်းလွှာအရှင်ဘာတွန်းအားများအတွက်သက်ဆိုင်ရာပုံရသည်သွန်းလောင်းလှုံ့ဆျောမှုကနေအဆင်ပြေအောင်။ ပထမဦးစွာတစ်ဦးကျဘာရည်ရွယ်ချက်ကအဖြစ်တိုးမြှင့်အချက် (အသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏ, စိတ်လှုပ်ရှားဆွဲဆောင်မှု, uninhibited feeling သတင်းပို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖမ်းယူနှင့်သောအခါအအွန်လိုင်းဝမ်းသာပီတိမယ်လို့လူငယ်တို့, 2008) ။ ဒုတိယအနေကျဘာအသုံးပြုသူများသည် (ထိုဆိုက်ဘာစပေ့ယဉ်ကျေးမှုလူမှုရေးဆက်နွယ်မှုရန်အန္တရာယ်ရှိသောလမ်းကြောင်းအပေါ်တောင်မှသူတို့ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးစိတ်ကူးယဉ်၏အားပေးမှုနဲ့လက်ခံမှုကိုကမ်းလှမ်းဘယ်မှာအသစ်တခုလူမှုရေးလောကစူးစမ်းလူငယ်တို့, 2008), အရာဘာရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်လူမှုရေးအချက်များ၏ဆက်စပ်မှုဖော်ပြသည်။ တတိယ, ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအတိုင်းအတာကျဘာအသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏသူတို့ဘာလှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်တဲ့အခါမှာအစစ်အမှန်ဘဝစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေးခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အဖြစ်မှန်နှင့်အတူပြိုပျက်ရာ (တွေ့ကြုံခံစားကြောင်းဆက်စပ်ကြောင်းပေးထား, ဘာရည်ရွယ်ချက်တွေလျှောက်ထားနိုင်Laier & အမှတ်တံဆိပ်, 2014).
သို့သော်ဆိုက်ဘာဆက်ဆပ်မှုသည်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ကွာခြားသည်။ ဥပမာ၊ “ အထူးအစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်ပြုလုပ်ရမည့်အရာ” သို့မဟုတ်“ သင်အတူတကွစုဝေးကြသောအခါသင်၏သူငယ်ချင်းများကလုပ်သောအရာ” စသည့် GMQ ပစ္စည်းများဖြင့်အကဲဖြတ်ထားသောအကြောင်းရင်းများသည်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအကဲဖြတ်မှုအတွက်သင့်တော်ပုံမပေါ်ပါ။ ထို့အပြင်တိကျသောဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှု (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) ကို GMQ နှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်တိကျသော CysexMQ လိုအပ်သည်။
အဆိုပါ CysexMQ: ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ GMQ တစ်ခုအဆင်ပြေအောင်ဗားရှင်းကျဘာများအတွက်စိတ်ရင်း၏အချက်ဖွဲ့စည်းပုံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြဖို့ပဲ။
်ထမ်းခေါ်ယူမှုအထူးပြုဖိုရမ်များနှင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ posted ကြော်ငြာများမှတဆင့်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Inclusion စံ 18 နှစ်နှင့်အဟောင်းများနှင့်လိင်-ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများနှင့်အတူဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းခဲ့ကြသည်။
နှစ်ဦးကကွဲပြားနမူနာစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုဖို့ link ကိုနှိပ်လိုက်သူ 774 ဘာသာရပ်များအနက်သူတို့ထဲမှ 640 ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုပေး၏။ အဆိုပါ GMQ အပေါ်ပျောက်ဆုံးနေတန်ဖိုးများနှင့်အတူအမှုများဖယ်ရှားပြီးနောက်ကျနော်တို့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက် 395 ဘာသာရပ်များပါဝင်သည်။ (နမူနာ 1 အတွက်n = 191), 137 (71.7%) အထီးခဲ့ကြသည်။ အသက်အရွယ်သည် ၁၈ နှစ်မှ ၆၉ နှစ်ကြားဖြစ်ပြီးအလယ်အလတ် ၃၂ နှစ်ရှိသည်။ ယောက်ျားများသည်အမျိုးသမီးများထက်အသက်ကြီးသူများဖြစ်သည်။ (ပျမ်းမျှအသက်အထီး - ၃၄ နှစ်၊ အမျိုးသမီးပျမ်းမျှအသက် - ၂၇; ဝီလ်ကော့စွန်) - W = 3,247; p <.05) ။ ဘာသာရပ်ခုနစ်ဆယ်ခြောက် (၃၉.၈%) သည်တစ်ကိုယ်ရေသမားများဖြစ်ကြပြီး ၇၂ (၃၇.၇%) သည်ဆွေမျိုးသားချင်းများဖြစ်ကြပြီး ၄၂ (၂၂.၀%) သည်လက်ထပ်ပြီး ၁ ယောက်ကမုဆိုးမဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၁၄၅ (၇၇.၅%) ကသူတို့ကိုယ်သူတို့လိင်ကွဲသူတွေဖြစ်ပြီး ၁၁ (၅.၉%) ကလိင်တူဆက်ဆံသူတွေဖြစ်ပြီး ၃၁ (၁၆.၆%) ကလိင်တူဆက်ဆံသူတွေဖြစ်တယ်လို့ကြေငြာပါတယ်။ နမူနာ 39.8 မှာ (n = 204), 76 ဘာသာရပ်များ (37.6%) အထီးခဲ့ကြသည်။ အသက်အရွယ်သည် ၁၈ နှစ်မှ ၅၈ နှစ်ကြားဖြစ်ပြီးအလယ်အလတ် ၃၁ နှစ်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ငယ်သည်။ (ပျမ်းမျှအသက်အရွယ်ယောက်ျား - ၂၉ နှစ်၊ အမျိုးသမီးပျမ်းမျှအသက် - ၃၂.၅; Wilcoxon test: W = 3,790; p <.05) ။ ဘာသာရပ် ၄၀ (၁၉.၇%) သည်တစ်ကိုယ်ရေဘဝဖြစ်ပြီး ၁၀၇ ယောက် (၅၂.၇%) သည်ဆွေမျိုးသားချင်းများဖြစ်ကြသည်။ ၅၄ (၂၆.၆%) သည်လက်ထပ်ပြီး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၁၇၂ (၈၄.၇%) ကသူတို့ကိုယ်သူတို့လိင်ကွဲများဖြစ်ကြပြီး ၈ (၃.၉%) ကလိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်ပြီး၊ (၂၃ (၁၁.၃%)) သည်လိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်သည်။
အားလုံးသင်တန်းသားများကိုပထမဦးဆုံး, (သူတို့ရဲ့အင်တာနက်ကိုနှင့်အတူအတွေ့အကြုံနှင့်လိင်အကြောင်းကိုအစည်းအဝေးများနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာအွန်လိုင်းသုံးစွဲအချိန် (စသည်တို့ကိုလိင်, အသက်, နိုင်ငံသား, လိင်,) ထိုသူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်အထွေထွေမေးခွန်းလွှာဖြည့နှင့် 24-item တခုကိုပုံစံ ပြီးခဲ့သည့်လကနေစဉ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကအင်တာနက်ပေါ်တွင်အကြိမ်ရေ, etc) ။
အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory (SDI) နှင့် CysexMQ: လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်စုရုံးခြင်းကွဲပြားခြားနားသော Self-rating မေးခွန်း၏ပြီးစီးသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ SDI (Spector, Carey, & Steinberg, 1996) (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအကဲဖြတ်များအတွက်အသုံးအများဆုံးတူရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်မာကု, Toland, Rosenkrantz, ဘရောင်း - Stein, & ဟောင်ကောင်, 2018) ။ အဆိုပါစကေး (အင်္ဂလိပ်လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်King & Allgeier, 2000; Moyano, Vallejo-မက်ဒီနာ, & Sierra, 2017; Ortega, Zubeidat, & Sierra, 2006; Spector et al ။ , 1996) ကို SDI ၏၎ psychometric ဝိသေသလက္ခဏာများလည်း (လိင်တူချစ်သူများနှင့်လိင်တူချင်းအထီးအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်အမျိုးအစား, အတူလူတို့တွင်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်မာကု et al ။ , 2018).
အဆိုပါ SDI လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏သိမြင်မှုအစိတ်အပိုင်းအကဲဖြတ်ရန်တီထွင်ခဲ့သည်။ dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစိတ်ဝင်စားကြောင်း) နှင့်တိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (မိမိကိုယ်ကိုအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပါဝငျစိတ်ဝင်စားကြောင်း): အဆိုပါတူရိယာနှစ်ခုရှုထောင့်ကပါဝင်ပတ်သက်။ အဆိုပါ dyadic အတိုင်းအတာတနာတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ဆက်စပ်သည်သော်လည်းအဆိုပါတိုက်ပိတ်အတိုင်းအတာ (တိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ဆက်စပ်သည်Spector et al ။ , 1996) ။ (ယုံကြည်စိတ်ချရစမ်းသပ်-retest ကောင်းသောSpector et al ။ , 1996) convergence တရားဝင်မှု (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အခြားအစီအမံနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်အစီရင်ခံထားသည်မာကု et al ။ , 2018).
အဆိုပါ CysexMQ5နေ 1-အမှတ် Likert စကေး (အပေါ် rated သော Self-အကဲဖြတ်စကေး (နောက်ဆက်တွဲပစ္စည်း) ဖြစ်ပါသည်ဘယ်တော့မှ) (5 မှအမြဲသို့မဟုတ်နီးပါးအမြဲ).
စာရေးသူများသည်ဆိုက်ဘာဆက်စ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန် GMQ ၏လူမှုရေးစိတ်ရင်းဆိုင်ရာအဆင့်အတန်းရှိပစ္စည်းများကိုပြုပြင်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်“ ပွဲကျင်းပရန်နည်းလမ်းတစ်ခု”၊ “ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေစုဝေးကြတဲ့အခါသူတို့လုပ်တဲ့အရာ” နှင့်“ ဒါဟာထူးခြားတဲ့အချိန်တွေမှာမင်းပြုမူတာ” ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။ အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်“ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်” နှင့်“ အခြားလူများနှင့်လဲလှယ်ရန်လိုအပ်သည်” စသည့်လူမှုရေးစိတ်ရင်းများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ “ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ရန်” ရည်ရွယ်ချက်ကို“ သူတစ်ပါးနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းနှင့်တန်ဖိုးထားခြင်းတို့အတွက်” ကိုပြုပြင်ခဲ့သည်။ GMQ တိုးမြှင့်မှုရည်ရွယ်ချက်အတွက်“ ငွေရှာရန်” ပစ္စည်းကို“ ဖျော်ဖြေမှုရရန်” ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ ဆိုက်ဘာဆက်ဆတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားသီးခြားရည်ရွယ်ချက်များမှာ“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” နှင့်“ စောင့်ကြည့်ခြင်း” တို့ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းများကိုဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း။ လူနာများအားနက်ရှိုင်းသောလက်တွေ့ကျသောအင်တာဗျူးများမှတစ်ဆင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤလူနာများသည်ဂျီနီဗာတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၏စိတ်ကျန်းမာရေးဌာနနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန၌စွဲလမ်းသည့်ဆိုက်ဘာဆက်စ်အတွက်အကြံဥာဏ်ပေးသည်။ Clinician များနှင့်စာရေးဆရာများအကြားအကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်ဒုတိယ၊ စတုတ္ထနှင့်ပဉ္စမစာရေးသူများသည်အရည်အသွေးပြည့်မှီသောတုံ့ပြန်မှုများကိုအကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ထိုပစ္စည်းများကိုမျိုးဆက်၏အခြေခံမူများ (ဥပမာ - ပြissueနာတစ်ခုတည်းကိုဖြေရှင်းခြင်း၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖော်ပြခြင်း၊ Harrison & McLaughlin, 1993) နှင့်တစ်ဦးသဘောတူညီမှုစာရေးသူအကြားရောက်ရှိခဲ့ပါသည်သည်အထိဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဤလေ့လာမှု၏အဓိကရလဒ်အတိုင်းအရှည် CysexMQ ဖြစ်ခဲ့သည်။
သုံးအချက်ဖွဲ့စည်းပုံမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းအနေနဲ့ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပထမဦးဆုံးအသစ်မူဘောင်အတွင်းပေါ်ထွက်လာဖို့တိကျတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခွင့်ပြုပါရန်အလို့ငှာတစ်ဦး confirmatory ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအစားဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ဒီရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ကျနော်တို့ 191 ၏မူလနမူနာအပေါ်တစ်ဦး varimax လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နေတဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (PCA) ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အမှုမဟုတ်သောအရာမဆိုအထူးသဖြင့် multivariate မော်ဒယ်, (မယူဆပါဘူးကြောင့် GMQ ပစ္စည်းများကို၏ discrete သဘောသဘာဝနှင့်အတူတစ် PCA တစ်ခုရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကျော်ပိုမိုနှစ်သက်နေသည်Schneeweiss & Mathes, 1995) ။ အချက်များစွာသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းများ၏တူညီသောနံပါတ်များကိုထုတ်ယူကြသောအခါထိုမှတပါး, နှစ်ဦးစလုံးနည်းစနစ် (အလွန်အမင်းအလားတူရလာဒ်များထုတ်ပေးVelicer & Jackson, 1990) ။ ထုတ်ယူဖို့အစိတ်အပိုင်းများအရေအတွက် scree စမ်းသပ်မှု (ကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်Cattell, 1966), နှင့် Velicer ရဲ့ (1976) နိမ့်ဆုံးပျမ်းမျှအားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (MAP) စမ်းသပ်မှုဆက်စပ်မှု matrix ကိုပေါ်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမြေပုံစမ်းသပ် bootstrapped ခဲ့သည်။
တစ်စက္ကန့်ခြေလှမ်းအတွက်, ကျွန်တော်တစ်ဦး confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (CFA) ကို run နိုင်ရန်အတွက် 204 တစ်စက္ကန့်နမူနာစုဆောင်း။ သောကြောင့်ကြံ့ခိုင်စံအမှားအယွင်းများ (အတူ CysexMQ ပစ္စည်းများ, အ unweighted အနည်းဆုံးရင်ပြင် (ULS) ၏ discrete သဘာဝတရား၏လီ, 2016) method ကိုခန့်မှန်းချက်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးသောစံသတ်မှတ်ချက် ၅ ချက်သည်အချက်အလက်နှင့်မကိုက်ညီသောကောင်းမှု၏အညွှန်းကိန်းများအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ (က) ချိန်ညှိထားသောကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသောညွှန်းကိန်း (AGFI)> 0.80 (Joreskog & Sorbom, 1996); (ခ) စံ - မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း (NFI)> 0.90 (Bentler & Bonnet, 1980); (ဂ) Tucker-Lewis ကအညွှန်းကိန်း (TLI)> 0.95 (Tucker & Lewis က, 1973); ()) နှိုင်းယှဉ်မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း (CFI)> 0.95 (Bentler, 1990); နှင့် (င) အကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်း၏စတုရန်းအမှား (RMSEA) <0.06 (Hu & Bentler, 1999) ။ အဆိုပါ AGFI များအသုံးပြုမှုနှင့် cutoff (ကိုးလ်တို့ကအကြံပြုခဲ့သည်1987), Bentler နှင့် Bonnet အားဖြင့် NFI (၏1980), နှင့် RMSEA, TLI နှင့် CFI ၏ဟူနှင့် Bentler အားဖြင့် (1999).
မေးခွန်းလွှာများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရ (အ Cronbach ရဲ့αကိန်းသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်Cronbach & Meehl, 1985) နှင့်ပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု၏အစီအမံနေသောပေါင်းစပ်ယုံကြည်စိတ်ချရ (CR) ။ convergence တရားဝင်မှုအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ dyadic နှင့်တိုက်ပိတ် SDI subscales နှင့် CysexMQ subscales အကြား Spearman ရဲ့ဆက်စပ်မှုတွက်ချက်။ အဆိုပါ PCA, CFA နှင့် bootstrap အဆိုပါသုံးပြီး R ကိုဗားရှင်း 3.1.3 နှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့ကြ psyche (ဗျာဒိတ်ကျမ်း, 2014), bootstrap (Kostyshak, 2015), နှင့် lavaan (Rosseel, 2012) packages များ။
အဆိုပါလေ့လာမှုလုပျထုံးလုပျနညျးဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာစာတမ်းနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ဂျီနီဗာတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကော်မတီကလေ့လာမှု protocol ကိုအဘို့အခွင့်ပြုချက်ကိုပေး၏။ သင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်နည်းစနစ်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ အွန်လိုင်းအသိပေးသဘောတူညီခကျြပြီးနောက်သင်တန်းသားများကို SurveyMonkey လင့်များကနေတဆင့်အွန်လိုင်းအမည်ဝှက်မေးခွန်းပြီးစီးခဲ့သည်။
အဆိုပါ PCA ထံမှရလဒ်များ
တစ်ခုခုကိုနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုအချက်များ (အသီးသီး 1 နှင့် 2) အနီးကပ်တန်ဖိုးများခဲ့သောကြောင့်သည့် MAP စမ်းသပ်မှု (နောက်ဆက်တွဲပစ္စည်း၏ပုံ S0.0301) တစ်ခုစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြေရှင်းချက်ပေးကြ၏သော်လည်းအဆိုပါ scree စမ်းသပ်မှု (နောက်ဆက်တွဲပစ္စည်း၏ပုံ S0.0302) ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတတ်သည်ဟုသိမှတ်လျက်, သုံးအချက်များဆက်ပြီးအကြံပြု သေးငယ်တဲ့ပိုကောင်း၏အခြေခံပေါ်မှာအမှုကိုပြုခံရသည့် MAP စမ်းသပ်အနက်။ အဆိုပါမြေပုံစမ်းသပ်မှုရလဒ် disentangle ဖို့ကျနော်တို့ (က bootstrap technique ကိုလျှောက်ထားEfron, 1987), သောမရေရာဒွိဟအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ 1,000 bootstrap နမူနာများအနက် 52% နှစ်ခုအချက်များဆက်ပြီးအကြံပြုနှင့် 43% သုံးအချက်များဆက်ပြီးအကြံပြု; နှစ်ခုနှင့်သုံးအချက်များများအတွက် bootstrapped သည့် MAP စမ်းသပ်မှု (နောက်ဆက်တွဲပစ္စည်း၏ပုံ S3) ကနေ boxplots လုံးဝနီးပါးခေ။
အချက်များ II နှင့် III ကိုအပေါ်အသီးသီးအချက်များငါနှင့် II ကိုအပေါ်ပစ္စည်းများ 0.40 နှင့်2နှင့် Item 17: သူတို့တစ်ဦးထက်ပိုအစိတ်အပိုင်းအပေါ် 16 ထက် သာ. ကြီးမြတ် Loading ခဲ့သောကွောငျ့သုံးပစ္စည်းများ, သုံးယောက်-Factor ဖြေရှင်းချက်အတွင်းပြဿနာဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ခု-Factor ဖြေရှင်းချက် ( "ကိုယ်အကြောင်းကိုယုံကြည်မှု feeling နှင့်ငါ့ Self-လေးစားမှုအဆင့်မြှင့်များအတွက်") Item 0.37 အပေါ် 13 နှင့်အတူအသေးငယ်ဆုံးတင်, ပါရှိသော။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအစိတ်အပိုင်းများအပေါ် 12 ထက် သာ. ကြီးမြတ် Loading ခဲ့သောကွောငျ့ items 15, 17 နှင့် 0.40 လည်းပြဿနာဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကရှင်းပြသည်ကှဲလှဲသုံးခု-Factor ဖြေရှင်းချက်များအတွက်နှစ်ခု-Factor ဖြေရှင်းချက်နဲ့ 0.47 များအတွက် 0.55 အကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ factor Loading ဇယား S1 နှင့်နောက်ဆက်တွဲပစ္စည်း၏ S2 မှာပြနေကြသည်။
တစ်ဦးက Cross-တင်တိုးမြှင့်အပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ပစ္စည်း2( "အနားယူရန်") နှင့် Item 17 ( "ငါ့ကိုအကောင်းခံစားမိစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်") များအတွက်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်လူမှုရေးအချက်များပေါ်တွင်တစ်ဦးကကွဲပြားခြားနားတဲ့ Cross-တင် ( "ကိုယ်အကြောင်းကိုယုံကြည်မှု feeling နှင့်ငါ့ Self-လေးစားမှုအဆင့်မြှင့်များအတွက်") Item 16 များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ပစ္စည်းများ2နှင့် 17 ၏ Cross-တင်အတွက်ဆငျတူကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးဤပစ္စည်းများကိုမရှိဘဲမော်ဒယ်စမ်းသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သောကြောင့် (3F-တစ်; ဇယား 1Self-လေးစားမှုစိတ်ရင်းအဘို့ဘာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သော), ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်, သို့သော်, Item 16 ။ ထို့နောက်ကျွန်တော် Cross-တင် (3F-ခအားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာသုံးပစ္စည်းများမပါဘဲတစ်ဦးပုံစံကိုစမ်းသပ်; ဇယား 1).
စားပွဲတင် 1 ။ လေးပါးမော်ဒယ် ULS confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှ Fit ညွှန်းကိန်း
Two-Factor မော်ဒယ် 0.990 0.971 0.978 0.981 0.095
သုံး-Factor မော်ဒယ် 0.991 0.976 0.983 0.986 0.084
2 နှင့် 17 (မော်ဒယ် 3F-က) အားဖယ်ရှားပစ္စည်းများနှင့်အတူသုံး-Factor မော်ဒယ် 0.993 0.979 0.986 0.988 0.077
2, 16 နှင့် 17 (မော်ဒယ် 3F-ခ) ကိုဖယ်ရှားပစ္စည်းများနှင့်အတူသုံး-Factor မော်ဒယ် 0.993 0.978 0.985 0.988 0.076
မှတ်စု။ ULS: unweighted အနည်းဆုံးရင်ပြင်; AGFI: ချိန်ညှိကောင်းမြတ်ခြင်း-of-မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း; NFI: စံချိန်စံညွှန်း-မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း; TLI: Tucker-Lewis ကအညွှန်းကိန်း; CFI: နှိုင်းယှဉ်ထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း; RMSEA: အမြစ်အကြမ်းဖျင်း၏စတုရန်းအမှားဆိုလို။
အဆိုပါ CFA ထံမှရလဒ်များ
ဒါကြောင့်နှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးအချက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် သာ. ကောင်း၏ရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးစလုံးမော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ စားပွဲတင်၏ပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု 1 နှစ်ခု-Factor နှင့်သုံး-Factor ဖြေရှင်းချက်၏မထိုက်မတန်ညွှန်းကိန်းပြသထားတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးမော်ဒယ်များ 0.06 ၏ cutoff ထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးတဲ့သော RMSEA, မှလွဲ. အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မထိုက်မတန်လြှော့။ အဆိုပါသုံး-Factor ဖြေရှင်းချက်နေရာတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်ပြသထားတယ်။ မထိုက်မတန်ညွှန်းကိန်းနှစ်ခုမော်ဒယ်များများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားရန်အလွန်နီးကပ်ခဲ့ကြပြီးကတည်းကကျနော်တို့မရှိသစံသည်နှင့်ခန့်မှန်းချက်၏နည်းလမ်း ULS အခါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမော်ဒယ်များများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတည်ပြုကြောင်း သိ. ကစာရင်းအင်းသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်။ ကျနော်တို့လူသိများတဲ့χညီမျှဖြစ်သော, အလျောက်ပတ်တဲ့ function ၏အခြေခံပေါ်မှာအရေးပါမှုကိုစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်2 စမ်းသပ်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုသုံးခုအချက်များနှင့်အတူမော်ဒယ်နှစ်ခုအချက်များ (လျောက်ပတ်-function ကိုခြားနားချက် = 67.18, အတူမော်ဒယ်ထက်ပိုကောင်းကြောင်းပြသ df = 2, p <.001) ။ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် PCA မှဖြတ်ကျော်တင်သောပြproblemsနာများနှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောလက်တွေ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများအားထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်နောက်ထပ်ပုံစံနှစ်မျိုးကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ပထမ (Model 3F-a) သည်အချက် (၂) နှင့် (၁၇) ကိုဖယ်ရှားပြီးအချက်သုံးချက်ပါသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပြီးဒုတိယ (Model 2F-b) တွင်အချက် (၁၆) ကိုလည်းဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အချက်သုံးချက်နှင့်အတူမော်ဒယ်သုံးခု၏မထိုက်မတန်ညွှန်းကိန်းဇယား၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းအတွက်တင်ပြနေကြသည် 1။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကိုက်ညီတဲ့မော်ဒယ် 3F-တစ်များအတွက် RMSEA မှလွဲ. တွေ့ရှိခဲ့သည်ပေမယ့်မော်ဒယ် 3F-ခတိုင်းအညွှန်းကိန်းအပေါ်ပိုကောင်းမထိုက်မတန်ပြသသော်လည်း, က, အပြည့်အဝမော်ဒယ်လုပ်ခဲ့တယ်ထက် data တွေကိုပိုဆိုး fit ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သမေးခွန်းလွှာထံမှပစ္စည်းများ 2, 16 နှင့် 17 ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
စားပှဲ2အထက်ပါရလဒ်များအရသိရသည်ဖယ်ရှားပစ္စည်းများ 2, 16 နှင့် 17 အတူသုံး-Factor ဖြေရှင်းချက်၏ Loading ပြသထားတယ်။ တိုင်းတင်0ကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ သုံးယောက်အချက်များအကြားခန့်မှန်းဆက်စပ်မှုသိသိသာသာရှိကြ၏။
စားပွဲတင်2။ ကြံ့ခိုင်စံအမှားအယွင်းများ confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူ ULS ကနေသုံး-Factor ဖြေရှင်းချက်များအတွက် factor Loading
factor ငါ (တိုးမြှင့်)
4. ငါခံစားချက်ကြိုက်လို့ပဲ 1.04 0.08 13.31 > .001
၇ 1.12 0.09 12.77 > .001
၉ 0.97 0.08 11.52 > .001
၁၀။ မြင့်မားသောခံစားမှုရရှိရန် 0.97 0.09 10.29 > .001
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက် 11 0.79 0.08 9.52 > .001
၁၃ 1.18 0.08 14.40 > .001
factor II ကို (စိတ်ရင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း: ထွက်ပေါက်)
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါ (သို့) စိတ်လှုပ်ရှားနေချိန်မှာအဲဒါကကူညီပေးတယ် 0.95 0.07 14.30 > .001
၁၅။ ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါငါနှစ်သိမ့်ပေးတယ် 1.01 0.07 14.18 > .001
factor III ကို (လူမှုရေးစိတ်ရင်း)
၃။ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံရန် 1.00
ကျွန်ုပ်သည်အခြားလူများနှင့်လဲလှယ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် 1.98 0.49 4.03 > .001
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းနှင့်အခြားသူများအားဖြင့်တန်ဖိုးထားဖြစ်ခြင်းများအတွက် 8. 2.07 0.55 3.78 > .001
၁၄။ လူမှုရေးစုရုံးမှုကိုပိုပြီးပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်ပေးလို့ပါ 1.84 0.49 3.80 > .001
အကြောင်းရင်းများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း 0.69 0.03 22.7 > .001
လူမှုစိတ်ရင်း 0.25 0.02 13.3 > .001
လူမှုစိတ်ရင်း 0.30 0.02 12.8 > .001
မှတ်စု။ အရှေ့တောင်: စံအမှား; ULS: unweighted အနည်းဆုံးရင်ပြင်။
အဆိုပါ GMQ အချက်များနှင့်အညီ, သုံးယောက်ထိန်းသိမ်းထားအချက်များတိုးမြှင့် (ပထမအချက်), (ဒုတိယအချက်) ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်လူမှုရေးစိတ်ရင်း (တတိယအချက်) တို့ဖြစ်သည်။
သုံးယောက်-Factor ဖြေရှင်းချက် (မော်ဒယ် 3F-ခ) များအတွက် Cronbach ရဲ့αအားဖြင့်ခန့်မှန်းအတွင်းပိုင်းကိုက်ညီမှု 0.81 အကြောင်းကိုခဲ့ [95% ယုံကြည်မှုကြားကာလ (CI): 0.79, 0.83] နှင့် 0.88 [95% CI: 0.86, 0.91] တိုးမြှင့်အချက်အဘို့ ; 0.79 [95% CI: 0.76, 0.81] နှင့် 0.86 [95% CI: 0.83, 0.89] ကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစိတ်ရင်းအချက်သည် ဖြစ်. , နှင့် 0.74 [95% CI: 0.71, 0.77] နှင့် 0.76 [95% CI: 0.71, 0.81] လူမှုစိတ်ရင်းများအတွက်အသီးသီး, ပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယနမူနာများတွင်ဆခွဲကိန်း။ ထို့အပြင် CR (ဘေကွန်, Sauer, & လူငယ်, 1995) Cronbach ရဲ့αတိကျတဲ့အခြေအနေများတွင်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရလျှော့မတွက်ဖို့လူသိများသည်ကို ထောက်. (ဖျော်ဖြေခဲ့သည်Raykov, 1998) ။ CR နီးပါး Cronbach ရဲ့αအဖြစ်တူညီကိန်း (:; ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစိတ်ရင်း 0.81 နှင့် 0.89: 0.82 နှင့် 0.86; နှင့်လူမှုရေးစိတ်ရင်း: အသီးသီးပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယနမူနာအတွက် 0.73 နှင့် 0.79, တိုးမြှင်) သည်။ Cronbach ရဲ့αနှင့် CR ကောင်းသောယုံကြည်စိတ်ချရအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သေးငယ်တဲ့ဆက်စပ်မှုကဤ subscales နှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစိတ်ရင်းအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်သော်လည်းအလယ်အလတ်အပြုသဘောဆက်စပ်မှုသည် SDI subscales နှင့်တိုးမြှင့်စိတ်ရင်းအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အသေးစားဆက်စပ်မှုလူမှုရေးစိတ်ရင်းနှင့် dyadic SDI subscale ပေမယ့်မဆိတ်ညံ SDI (ဇယားများအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည် 3).
စားပွဲတင်3။ CysexMQ နှင့် SDI subscales အကြား Spearman ရဲ့ဆက်စပ်မှု
SDI dyadic .46*** .18*** .18***
SDI တိုက်ပိတ် .54*** .18*** .07
မှတ်စု။ CysexMQ: ဘာလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ; SDI: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory ။
အဆိုပါ GMQ အပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများထွက်မတ်တပ်ရပ်သုံး-Factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ (နေသော်လည်းStewart က & Zack, 2008) နှင့်သွန်းလောင်းလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ (Cooper et al ။ , 1992), ကျနော်တို့က CysexMQ ၏အဆင်ပြေအောင် 17-item ကိုဗားရှင်းအပေါ်တစ်ဦး PCA ဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုမတှေ့နိုငျတယျ။ အဆိုပါ two- နှင့်သုံး-Factor ဖြေရှင်းချက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အချို့ပစ္စည်းများကိုတစ်ဦးထက်ပိုအချက်ပေါ်တွင်မြင့်သော Cross-Loading ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်စက္ကန့်ခြေလှမ်းအတွက်, သို့သော်, တစ်စက္ကန့်နမူနာအပေါ်တစ်ဦး CFA သုံး-Factor ဖြေရှင်းချက်ပိုကောင်းဒေတာ fit ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
Cross-Load နှင့်အတူပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျနော်တို့နှစ်ခုဒါမှမဟုတ်ပြဿနာပစ္စည်းများသုံးစရာမလိုဘဲသုံးအချက်များနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များအကဲဖြတ်။ အကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်ညွှန်းကိန်းသုံးခုပြဿနာပစ္စည်းများမပါဘဲသုံး-Factor မော်ဒယ်ရယူခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံး CysexMQ တစ် 14-ကို item စကေးဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုသုံးဦး၏အမည်များ, အချက်များ, တိုးမြှင့်, ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်လူမှုရေးစိတ်ရင်းထိန်းသိမ်းထားသောကွောငျ့စိတျရငျးအမျိုးအစားများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတူ၏ GMQ များအတွက်အဆိုပြုသူတို့အားဆင်တူသည်။ ဤရလဒ် (လူမှုရေးရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုထောက်ခံကြောင်းယခင်လေ့လာမှုများ၏သူတို့နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Sumter et al ။ , 2017), (ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းLaier et al ။ , 2015), နှင့်တိုးမြှင့်စိတ်ရင်း (Reid et al ။ , 2011) ဘာအတွက်။ သို့သော်တော်တော်များများပစ္စည်းများဘာအပြုအမူတွေ၏တိကျသောထင်ဟပ်သည် GMQ မြားထံမှအခြို့သောနည်းလမ်းကွာခြား။
အားလုံး Loading ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာခဲ့ကြသည်နှင့်အတူပြင်းအားအကြောင်းကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသုံးအချက်များအတန်အသင့်အဆိုပါဆက်စပ်မှုမြင့်မားသောအဘို့တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစိတ်ရင်း, မှလွဲ. ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဟာ GMQ အပေါ်လေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကိုအတူ Concorde ဖြစ်ပါတယ်နှင့် (စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများတွင်ထိုကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်များတစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်Devos et al ။ , 2017; Wu, Tao, Tong, & Cheung, 2011) ။ ဤရွေ့ကားစိတ်ရင်း (အင်တာနက်ဂိမ်းကစားအပေါ်လေ့လာမှုများအစီရင်ခံအဖြစ်, ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာဘာအသုံးပြုမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍ play စေခြင်းငှါBillieux et al ။ , 2011; Zanetta Dauriat et al ။ , 2011) ။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ဓါတ်များမမှန်အကြားဖြစ်နိုင်ခြေအသင်းအဖွဲ့များအားဖြင့်အကြံပြုအဖြစ် (Khazaal et al ။ , 2016; Starcevic & Khazaal, 2017; Strittmatter et al ။ , 2015), အ CysexMQ, စိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေနှင့်ပြဿနာဘာအသုံးပြုမှုအကြားဖြစ်နိုင်သောလင့်များအပေါ်ထပ်မံလေ့လာမှုများမျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။
Cronbach ရဲ့αနှင့် CR နှစ်ဦးစလုံးအကောင်းပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုပြတော်မူ၏။ convergence တရားဝင်မှုဟာ SDI နှင့်အတူဆက်စပ်သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ဆက်စပ်မှုအဆင့်ဆင့်စိတ်ရင်းနှင့် dyadic နှင့်တိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, တိုက်ပိတ်အလိုဆန္ဒနှင့်လူမှုရေးစိတျရငျးအကြားမျှအသင်းအဖွဲ့ရှိ၏။ အင်အားအကောင်းဆုံးအသင်းအဖွဲ့များ (ကျဘာများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နှိုးဆွသောဆိုးကျိုးများနှင့်အတူကိုက်ညီမှုအတွက်ဘာအသုံးပြုမှုအတွက်ထိုကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်များ၏အရေးပါမှုကိုပြသသောတိုးမြှင့်စိတ်ရင်းနှင့် SDI subscales ကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်Beutel et al ။ , 2017; Reid et al ။ , 2011) ။ တစ်ဦးကဆက်စပ်မှု, ဒီထက်ခိုင်မာတဲ့ဆိုသော်ငြားလည်းစိတ်ရင်းနှင့် SDI subscales ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတို့အကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်များစိုးရိမျသို့မဟုတ်ရှောင်ကြဉ်ပါပူးတွဲမှုစတိုင်များ (သူကျဘာအသုံးပြုသူ subsamples အတွက်ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးအရေးကြီးလှသည်Favez & Tissot, 2016) ။ ဘာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကျဘာရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်ပူးတွဲမှုစတိုင်များအကဲဖြတ်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများကဒီအယူအဆစူးစမ်းဖို့မျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။
ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုအတော်ကြာအဓိကန့်အသတ်များအလငျး၌ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ပထမဦးစွာအွန်လိုင်းကြော်ငြာမှတဆင့်စုဆောင်းမှု (ဖြစ်နိုင်သော Self-Selection ကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Khazaal et al ။ , 2014) ။ ဒုတိယအနေအဖြစ်အများအား (အွန်လိုင်းလေ့လာမှုများနှင့်စစ်တမ်းများအစီရင်ခံFleming က et al ။ , 2016; Hochheimer et al ။ , 2016), ကနဦးနမူနာတစ်ခုသိသိသာသာအပိုင်း (395 ၏ 640) ကိုလေ့လာမှုပြီးစီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ တတိယအချက်မေးခွန်းလွှာကျဘာဖို့ GMQ ကပြွီးအားဖြင့်ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသလို, လိုက်လျောညီထွေလက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အပေါ်, နှင့်စာရေးဆရာများ '' သဘောတူညီမှုအပေါ်လယ်ပြင်၌ယခင်လေ့လာမှုများ, အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကတခြားရည်ရွယ်ချက်တွေအပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေဖယ်ထုတ်လို့မရပါဘူး။
သို့သော် CysexMQ အဆိုပါ psychometric ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့် SDI subscales နှင့်အတူဆက်စပ်နေဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းကျဘာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အဓိကရည်ရွယ်ချက်များအနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုဖမ်းမိခဲ့ကြပုံရသည်။
ဤလေ့လာမှုကတိုးမြှင့်ခြင်း (ဥပမာ - တိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်ဝခြင်း)၊ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ယခင်လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များအရဆိုက်ဘာဆက်စ်အသုံးပြုမှုတွင်လူမှုရေးစိတ်ရင်းများ၏ပါဝင်မှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည် (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2011; Laier & အမှတ်တံဆိပ်, 2014; Laier et al ။ , 2015; Reid et al ။ , 2011; Sumter et al ။ , 2017) ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်သုံးခု-Factor ဖြေရှင်းချက်နှစ်ခု-Factor ဖြေရှင်းချက်ထက်ဆေးခန်းကိုပိုမိုသက်ဆိုင်ရာကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထို့အပွငျ, ဒီကျဘာဖို့ GMQ တစ်ခုလိုက်လျောညီထွေအကဲဖြတ်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာရဲ့အကောင်းဆုံးမှပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ CysexMQ နှင့်ကျဘာအသုံးပြုမှုအကြားလင့်များအပေါ်ထပ်မံလေ့လာမှုများကဒီအပြုအမူအတွက်စိတ်ရင်း၏အခန်းကဏ္ဍကို၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုများအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်။
YK, FB-D ကိုနှင့် SR: လေ့လာမှုအယူအဆနှင့်ဒီဇိုင်း။ EF, SR နှင့် YK: စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အချက်အလက်များ၏အနက်ကို။ TL, KJ နှင့် YK: စုဆောင်းမှု။ EF, YK, KJ, TL, SR နှင့် FB-D ကို: လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏တည်းဖြတ်ရန်။
အဆိုပါစာရေးဆရာများအင်္ဂလိပ်ဘာသာတည်းဖြတ်ရေးအဘို့, ဇီဝဆေးပညာအယ်ဒီတာများ၏ဘာဘရာတိုင်း, ELS, ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သင်တန်းသားများကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
ဘေကွန်, R. R. , Sauer, P. L. , & လူငယ်, အမ် (1995) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်အတွက်ဖွဲ့စည်းမှုယုံကြည်စိတ်ချရ။ ပညာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်းတာခြင်း, 55 (3), 394-406 ။ Doi:https://doi.org/10.1177/0013164495055003003 Google Scholar
Bentler, P. အမ် (1990) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်များအတွက်နှိုင်းယှဉ်မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 107 (2), 238-246 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/0033-2909.107.2.238 Crossref, Medline, Google Scholar
Bentler, P. အမ်, & Bonnet, G. G. အ (1980) ။ သိသာထင်ရှားသောစမ်းသပ်မှုများနှင့် covariance အဆောက်အ ဦ များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်မထိုက်မတန်၏ကောင်းမြတ်ခြင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 88 (3), 588-606 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/0033-2909.88.3.588 Crossref, Google Scholar
Beutel, အမ်အီး, Giralt, အက်စ်, Wolfling, K. , Stobel-Richter, Y. , Subic-Wrana, C တို့, Reiner, ဗြဲ, Tibubos, အေ N. , & Brahler, အီး (2017) ။ ဂျာမန်လူ ဦး ရေတွင်အွန်လိုင်းလိင်သုံးစွဲမှုပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်။ PLoS တစ်ခုမှာ, 12 (6), e0176449 ။ Doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176449 Medline, Google Scholar
Billieux, ဂျေ, Chanal, ဂျေ, Khazaal, Y. , Rochat, အယ်လ်, ဂေး, P. , Zullino, D. , & ဗန် der Linden, အမ် (2011) ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်များပြားစွာကစားသောအွန်လိုင်းအခန်းကဏ္ playing ကစားခြင်းများတွင်ပြproblemနာပါ ၀ င်မှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများ - အထီးဆိုက်ဘာကဖေးကစားသမားနမူနာတွင်ပုံဥပမာ။ စိတ်ပညာ, 44 (3), 165-171 ။ Doi:https://doi.org/10.1159/000322525 Crossref, Medline, Google Scholar
Billieux, ဂျေ, ဗန် der Linden, အမ်, Achab, အက်စ်, Khazaal, Y. , Paraskevopoulos, အယ်လ်, Zullino, D. , & Thorens, G. အ (2013) ။ ဘာကြောင့် World of Warcraft ကစားတာလဲ။ Azeroth ၏ virtual world တွင်အွန်လိုင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုအားအသေးစိတ်လေ့လာခြင်း။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 29 (1), 103-109 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.07.021 Crossref, Google Scholar
Bothe, ခ, Toth-Kiraly, ဗြဲ, Zsila, အေ, Griffiths က, အမ် D. , Demetrovics, Z. , & Orosz, G. အ (2018) ။ ပြtheနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုပမာဏ (PPCS) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 55 (3), 395-406 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1291798 Crossref, Medline, Google Scholar
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Laier, C တို့, Pawlikowski, အမ်, Schachtle, U. , Scholer, တီ, & Altstotter-Gleich, C. (2011) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း - လိင်မှုနှိုးဆွမှုအဆင့်များနှင့်အင်တာနက်လိင်ဆိုဒ်များကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါလက္ခဏာများ၏အခန်းကဏ္။ ။ Cyberpsychology, အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက်, 14 (6), 371-377 Doi:https://doi.org/10.1089/cyber.2010.0222 Crossref, Medline, Google Scholar
Carli, V. , Durkee, T. , Wasserman,,, Hadlaczky, G. အ, Despalins, R. , Kramarz, အီး, Wasserman, C, Sarchiapone, M. , Hoven, CW, Brunner, R. , & Kaess, အမ် (2013) ။ ရောဂါဗေဒအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် comorbid စိတ်ပညာ၏ဆက်စပ်မှု: စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်။ စိတ်ပညာ, 46 (1), 1-13 ။ Doi:https://doi.org/10.1159/000337971 Crossref, Medline, Google Scholar
Carnes, P. ဂျေ (2001) ။ ဆိုက်ဘာဆက်ဆတ်ခြင်း၊ ပိုးပန်းခြင်းနှင့်နှိုးဆွမှုမြင့်တက်ခြင်း - စွဲလမ်းစေသည့်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိသည့်အချက်များ။ လိင်စွဲ & compulsivity, 8 (1), 45-78 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720160127560 Google Scholar
Cattell, R. ခ (1966) ။ အချက်များ၏အရေအတွက်များအတွက် scree စမ်းသပ်။ Multivariate ။ အပြုအမူသုတေသန, 1 (2), 245-276 ။ Doi:https://doi.org/10.1207/s15327906mbr0102_10 Crossref, Medline, Google Scholar
Clarke, D. , Tse, အက်စ်, အက်ဘော့, အမ်ဒဗလျူ, Townsend, အက်စ်, Kingi, P. , & Manaia, ဒဗလျူ (2007) ။ ရောနှောနေသောလူမျိုးစုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းတွင်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောအကြောင်းပြချက်များနှင့်ပြ-နာမရှိသောလောင်းကစားသူများ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလောင်းကစားလေ့လာရေး,7(3), 299-313 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/14459790701601455 Google Scholar
ကိုးလ်, D. အေ (1987) ။ စမ်းသပ် validation ကိုသုတေသနအတွက် confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ Utility ကို။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 55 (4), 584-594 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/0022-006X.55.4.584 Medline, Google Scholar
Cooper က, အမ်အယ်လ်, စယ်, အမ်, Skinner, ဂျေခ, & Windle, အမ် (1992) ။ အရက်သောက်စိတ်ရင်းသုံးဖက်မြင်အတိုင်းအတာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတည်ပြု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်,4(2), 123-132 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/1040-3590.4.2.123 Google Scholar
Cronbach, အယ်လ်ဂျေ, & Meehl, P. အီး (1985) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများတွင်တရားဝင်မှုတည်ဆောက်ရန်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 52 (4), 281-302 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/h0040957 Google Scholar
Dechant, K. , & Ellery, အမ် (၂၀၁၁) ။ အလယ်အလတ်လောင်းကစားသမားများ၏နမူနာတွင်လောင်းကစားစိတ်ရင်းမေးခွန်းလွှာတွင်ငွေကြေးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပါဝင်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်, 2011 (27), 2-331 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10899-010-9197-x Medline, Google Scholar
Devos, G. အ, Bouju, G. အ, Burnay, ဂျေ, Maurage, P. , Grall-Bronnec, အမ်, & Billieux, ဂျေ (2017) ။ ပြင်သစ်စကားပြောလောင်းကစားသမားများအတွက်လောင်းကစားစိတ်ရင်းမေးခွန်းလွှာ - ဘဏ္(ာရေး (GMQ-F) ၏လိုက်လျောညီထွေမှုနှင့်အတည်ပြုခြင်း။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလောင်းကစားလေ့လာရေး, 17 (1), 87-101 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/14459795.2016.1264080 Google Scholar
Doring, N. အမ် (2009) ။ လိင်မှုအပေါ်အင်တာနက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - ၁၅ နှစ်တာသုတေသနအတွက်ဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 15, 25-1089 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.04.003 Crossref, Google Scholar
Dufour, အမ်, Brunelle, N. , Tremblay, ဂျေ, Leclerc, D. , Cousineau, အမ်အမ်, Khazaal, Y. , Légaré, အေအေ, ရူးဆိုး, အမ်, & Berbiche, D. (2016) ။ Quebec အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အင်တာနက်ပြproblemsနာများတွင်ကျား၊ မကွဲပြားမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ကနေဒါဂျာနယ်, 61 (10), 663-668 Doi:https://doi.org/10.1177/0706743716640755 Medline, Google Scholar
Efron, ခ (1987) ။ အဆိုပါ Jackknife သည် bootstrap နှင့်အခြား resampling အစီအစဉ်များ။ Philadelphia တွင်, PA: စက်မှုနှင့်အသုံးချသင်္ချာများအတွက် Society က။ Google Scholar
Favez, N. , & Tissot, အိပ်ချ် (2016) ။ ပူးတွဲပါသဘောထားတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: လိင်ကိုယ်စားပြုမှု၏ဖျန်ဖြေအခန်းကဏ္။ ။ လူမှုရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေး၏ဂျာနယ်, 14, 321-342 ။ Doi:https://doi.org/10.1177/0265407516658361 Google Scholar
Fleming, TM, de Beurs, D. , Khazaal, Y. , Gaggioli, အေ, Riva, G. အ, Botella, C, Baños, RM, Aschieri, အက်ဖ်, Bavin, LM, Kleiboer, အေ, Merry, အက်စ်, Lau, HM, & Riper, အိပ်ချ် (2016) ။ e- ကုထုံးနှင့်လေးနက်သောဂိမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအမြင့်ဆုံး: ပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲမှုအတွက်အချိန်။ ရှေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု, 7, 65. Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyt.2016.00065 Medline, Google Scholar
Frangos, C တို့, Frangos, C တို့, & Sotiropoulos, ဗြဲ (2011) ။ ဂရိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားပြInternetနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှု - အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဆိုဒ်များနှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောသာမာန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်ခြင်း။ Cyberpsychology, အပြုအမူနှင့်လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်, 14 (1-2), 51-58 ။ Doi:https://doi.org/10.1089/cyber.2009.0306 Medline, Google Scholar
Geisel, O. , Panneck, P. , Stickel, အေ, Schneider, အမ်, & Muller, C. အေ (2015) ။ လူမှုကွန်ယက်ဂိမ်းကစားသူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ - အွန်လိုင်းစစ်တမ်း၏ရလဒ်များ။ ရှေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု, 6, 69. Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyt.2015.00069 Medline, Google Scholar
Gmeiner, အမ်, စျေး, ဂျေ, & Worley, အမ် (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းအားသုတေသနပြုခြင်း - နည်းလမ်းနှင့်အရင်းအမြစ်လေးခုမှရလဒ်များ။ Cyberpsychology: ဆိုက်ဘာအာကာသဆိုင်ရာစိတ်ပညာသုတေသနဂျာနယ်၊ ၉ (၄)၊ ဆောင်းပါး ၄ ။https://doi.org/10.5817/CP2015-4-4 Google Scholar
Grov, C တို့, Gillespie, ခဂျေ, Royce, တီ, & လီဗာ, ဂျေ (2011) ။ လိင်တူချင်းဆက်ဆံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအွန်လိုင်းလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှု၏ရလာဒ်များ - အမေရိကန်အွန်လိုင်းစစ်တမ်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 40 (2), 429-439 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-010-9598-z Medline, Google Scholar
Grubbs, ဂျေခ, Volk, အက်ဖ်, Exline, ဂျေဂျေ, & Pargament, K. ဗြဲ (2015) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - စွဲစွဲလမ်းမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်အတိုချုပ်အတိုင်းအတာကိုအတည်ပြုခြင်း။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 41 (1), 83-106 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/0092623X.2013.842192 Medline, Google Scholar
Harrison, A. အေ, & McLaughlin, အမ်အီး (1993) ။ Self- အစီရင်ခံစာတုံ့ပြန်မှုအတွက်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ: အလုပ်သဘောထားကိုအစီအမံအတွက် item အခြေအနေတွင်သက်ရောက်မှုများ၏စမ်းသပ်မှု။ အသုံးချစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 78 (1), 129-140 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.1.129 Medline, Google Scholar
Hilgard, ဂျေ, Engelhardt, C. R. , & Bartholow, ခ D. (2013) ။ ဗီဒီယိုဂိမ်းများတွင်စိတ်ရင်း၊ ဦး စားပေးမှုနှင့်ရောဂါဗေဒကွဲပြားမှု - ဂိမ်းကစားခြင်းသဘောထားများ၊ စိတ်ရင်းများနှင့်အတွေ့အကြုံအကြေးခွံများ (GAMES) ။ စိတ်ပညာနယ်စပ်ဒေသများ၊ ၄၊ ၆၀၈ ။ Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00608 Crossref, Medline, Google Scholar
Hochheimer, C. ဂျေ, Sabo, R. တီ, Krist, အေအိပ်ချ်, နေ့, တီ, ကုရု, ဂျေ, & Woolf, အက်စ်အိပ်ချ် (2016) ။ web-based စစ်တမ်းများတွင်တုံ့ပြန် attribute အကဲဖြတ်ဘို့နည်းလမ်းများ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်တာနက်သုတေသနဂျာနယ်, 18 (11), e301 ။ Doi:https://doi.org/10.2196/jmir.6342 Medline, Google Scholar
ဟူ, အယ်လ်တီ, & Bentler, P. အမ် (1999) ။ covariance ဖွဲ့စည်းပုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်းများအတွက် Cutoff စံ: အသစ်ကအခြားနည်းလမ်းနှိုင်းယှဉ်သမားရိုးကျစံ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်,6(1), 1-55 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10705519909540118 Crossref, Google Scholar
Joreskog, K. G. အ, & Sorbom, D. (1996) ။ LISREL 8: အသုံးပြုသူ၏ရည်ညွှန်းလမ်းညွှန်။ ချီကာဂို, IL: သိပ္ပံနည်းကျ software ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ။ Google Scholar
Kafka, အမ်ပီ (2010) ။ Hypersexual Disorder: DSM-V အတွက်အဆိုပြုထားတဲ့ရောဂါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 39 (2), 377-400 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-009-9574-7 Crossref, Medline, Google Scholar
Khazaal, Y. , Achab, အက်စ်, Billieux, ဂျေ, Thorens, G. အ, Zullino, D. , Dufour, အမ်, & Rothen, အက်စ် (2015) ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းများနှင့်ဖဲချပ်ကစားသမားများရှိအင်တာနက်စွဲချက်စာမေးပွဲ၏အချက်အချာကျသောတည်ဆောက်ပုံ။ JMIR စိတ်ကျန်းမာရေး,2(2), e12 ။ Doi:https://doi.org/10.2196/mental.3805 Medline, Google Scholar
Khazaal, Y. , Chatton, အေ, Achab, အက်စ်, မွန်နီ, ဂျီ, Thorens, G. အ, Dufour, အမ်, Zullino,,, & Rothen, S. (2016) ။ အင်တာနက်လောင်းကစားသူများသည်လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုနှင့်ကွဲပြားသည်။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်, 33 (3), 881-897 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10899-016-9664-0 Google Scholar
Khazaal, Y. , Chatton, အေ, ချို, အေ, Achab, အက်စ်, Thorens, G. အ, Zullino, D. , & Billieux, ဂျေ (2012) ။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုစကေး (CIUS) ၏ပြင်သစ်အတည်ပြုခြင်း စိတ်ရောဂါလပတ်, 83 (4), 397-405 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s11126-012-9210-x Crossref, Medline, Google Scholar
Khazaal, Y. , ဗန် Singer, အမ်, Chatton, အေ, Achab, အက်စ်, Zullino, D. , Rothen, အက်စ်, Khan က, R. , Billieux, ဂျေ, & Thorens, G. အ (2014) ။ မိမိကိုယ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများတွင်နမူနာများ၏ကိုယ်စားပြုမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းသုတေသနအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်တာနက်သုတေသနဂျာနယ်, 16 (7), e164 ။ Doi:https://doi.org/10.2196/jmir.2759 Crossref, Medline, Google Scholar
ရှငျဘုရငျ, ခအီး, & Allgeier, အီး R. (2000) ။ ကောလိပ်ကျောင်းသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ, 86 (1), 347-350 ။ Doi:https://doi.org/10.2466/pr0.2000.86.1.347 Medline, Google Scholar
Kiraly, O. , Urban, R. , Griffiths က, အမ်,, Agoston, C, Nagygyorgy, K. , Kokonyei, G. အ, & Demetrovics, Z. (2015) ။ စိတ်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ပြproblemနာရှိသည့်အွန်လိုင်းဂိမ်းများအကြားဂိမ်းလှုံ့ဆော်မှု၏ကြားခံအကျိုးသက်ရောက်မှု - အွန်လိုင်းစစ်တမ်းတစ်ခု။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်တာနက်သုတေသနဂျာနယ်, 17 (4), e88 ။ Doi:https://doi.org/10.2196/jmir.3515 Crossref, Medline, Google Scholar
Kor, အေ, Zilcha-Mano, အက်စ်, Fogel, Y. အေ, Mikulincer, အမ်, ရိဒ်, R. C. , & Potenza, အမ် N. (2014) ။ ပြProbleနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ စွဲလမ်းအပြုအမူ, 39 (5), 861-868 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.01.027 Crossref, Medline, Google Scholar
Kostyshak, အက်စ် (2015) ။ package "boot တက်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်" ။ CRAN ။ မှရယူရန် https://cran.r-project.org/web/packages/bootstrap/bootstrap.pdf Google Scholar
Kuss, D. ဂျေ, Louws, ဂျေ, & Wiers, R. ဒဗလျူ (2012) ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲ? Multiple multiplayer online role-playing games များတွင်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများကိုခန့်မှန်းသည်။ Cyberpsychology, အမူအကျင့်နှင့်လူမှုကွန်ယက်၊ 15 (9), 480-485 ။ Doi:https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0034 Crossref, Medline, Google Scholar
Laier, C တို့, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2014) ။ ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားနှင့်သိမြင်မှု - အမူအကျင့်အမြင်ကနေဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးစွဲအထောက်အကူပြုအချက်များအပေါ်သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစား။ လိင်စွဲ & compulsivity, 21 (4), 305-321 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720162.2014.970722 Google Scholar
Laier, C တို့, Pawlikowski, အမ်, Pekal, ဂျေ, Schulte, အက်ဖ်ပီ, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2013) ။ Cybersex စွဲ - ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည့်အခါတွေ့ကြုံခဲ့ရသောလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်လက်တွေ့ဘ ၀ ၌လိင်ဆက်ဆံမှုမဟုတ်ပါကထူးခြားစေသည်။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,2(2), 100-107 ။ Doi:https://doi.org/10.1556/JBA.2.2013.002 လင့်ခ်, Google Scholar
Laier, C တို့, Pekal, ဂျေ, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2015) ။ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်အလုပ်မဖြစ်သောပြingနာများသည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုအထီးကျန်သောယောက်ျားများတွင်ဆိုက်ဘာဆက်စွဲမှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ Cyberpsychology, အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက်, 18 (10), 575-580 ။ Doi:https://doi.org/10.1089/cyber.2015.0152 Medline, Google Scholar
လီ, C. အိပ်ချ် (2016) ။ ordinal ဒေတာနှင့်အတူအတည်ပြုချက်အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: ကြံ့ခိုင်အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ထောင့်ဖြတ်အလေးချိန်အနည်းဆုံးရင်ပြင်နှိုင်းယှဉ်။ အပြုအမူသုတေသနနည်းလမ်းများ, 48 (3), 936-949 ။ Doi:https://doi.org/10.3758/s13428-015-0619-7 Medline, Google Scholar
မာကု, K. P. , Toland, အမ် D. , Rosenkrantz, D. အီး, ဘရောင်း - Stein, အိပ်ချ်အမ်, & ဟောင်ကောင်, S.-H. (2018) ။ လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူစာရင်းအတွက်လိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆန္ဒ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Oriental နှင့်ကျားမတူကွဲပြားမှု၏စိတ်ပညာ,5(1), 122-128 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/sgd0000260 Google Scholar
Moyano, N. , Vallejo-မက်ဒီနာ, P. , & Sierra, ဂျေစီ (2017) ။ လိင်အလိုဆန္ဒစာရင်း - ရှုထောင့်နှစ်ခု၊ သုံးခုလား။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 54 (1), 105-116 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224499.2015.1109581 Medline, Google Scholar
Ortega, V. , Zubeidat, ဗြဲ, & Sierra, ဂျေစီ (2006) ။ ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကျောင်းသားများနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ Inventory ၏စပိန်ဗားရှင်း၏တိုင်းတာခြင်းဂုဏ်သတ္တိများ၏နောက်ထပ်စာမေးပွဲ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ, 99 (1), 147-165 ။ Doi:https://doi.org/10.2466/pr0.99.1.147-165 Medline, Google Scholar
Raykov, တီ (1998) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသုတေသနအတွက် confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏အသုံးပြုမှုတွင်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 24 (2), 291-293 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/S0191-8869(97)00159-1 Google Scholar
ရိဒ်, R. C. , လီ, D. အက်စ်, Gilliland, R. , Stein, ဂျေအေ, & Fong, တီ (2011) ။ hypersexual ယောက်ျားနမူနာတစ်ခုအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့် Pornography စားသုံးမှုစာရင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 37 (5), 359-385 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/0092623X.2011.607047 Crossref, Medline, Google Scholar
ဗျာဒိတ်ကျမ်း, ဒဗလျူ (2014) ။ package "psyche" ။ CRAN ။ မှရယူရန် http://cran.r-project.org/web/packages/psych/psych.pdf Google Scholar
ရော်ဘင်ဆင်, တီအီး, & Berridge, K. C. (2008) ။ ပြန်လည်သုံးသပ်။ စွဲ၏မက်လုံးပေး sensitization သီအိုရီ: တချို့ကလက်ရှိပြissuesနာများကို။ လန်ဒန်တော်ဝင် Society ၏ဒosophနဆိုင်ရာအရောင်းအ။ စီးရီး B, ဇီဝသိပ္ပံ, 363 (1507), 3137-3146 ။ Doi:https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0093 Crossref, Medline, Google Scholar
ရော့စ်, အမ်ဒဗလျူ, Mansson, အက်စ်အေ, & Daneback, K. (2012) ။ ဆွီဒင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ပြသနာများ၊ ပြင်းထန်မှုနှင့်ပြproblemနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆက်စပ်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 41 (2), 459-466 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-011-9762-0 Crossref, Medline, Google Scholar
Rosseel, Y. (2012) ။ Lavaan: ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်များအတွက်တစ် R ကိုအထုပ်။ စာရင်းအင်း Software များ, 48 (2), 1-36 ၏ဂျာနယ်။ Doi:https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02 Crossref, Google Scholar
Schneeweiss, အိပ်ချ်, & Mathes, အိပ်ချ် (1995) ။ Factor analysis နှင့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ။ Multivariate အားသုံးသပ်ခြင်း၏ဂျာနယ်, 55 (1), 105-124 ။ Doi:https://doi.org/10.1006/jmva.1995.1069 Google Scholar
Spector, ဗြဲပီ, ကယ်ရီ, အမ်ပီ, & Steinberg, အယ်လ် (1996) ။ လိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒဆန္ဒ: ဖွံ့ဖြိုးရေး, အချက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ၏သက်သေအထောက်အထား။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 22 (3), 175-190 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00926239608414655 Medline, Google Scholar
Starcevic, V. , & Khazaal, Y. (2017) ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများအကြားဆက်နွယ်မှု - အဘယ်အရာကိုလူသိများသနည်း၊ ဘာသင်ယူရ ဦး မည်နည်း။ တပ် ဦး စိတ်ရောဂါကုသမှု, 8, 53. Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00053 Crossref, Medline, Google Scholar
Stewart က, အက်စ်အိပ်ချ်, & Zack, အမ် (2008) ။ သုံးဖက်မြင်လောင်းကစားစိတ်ရင်းမေးခွန်းလွှာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း။ စွဲ, 103 (7), 1110-1117 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2008.02235.x Crossref, Medline, Google Scholar
Strittmatter, အီး, Kaess, အမ်, Parzer, P. , Fischer, G. အ, Carli, V. , Hoven, CW, Wasserman, C, Sarchiapone, အမ်, Durkee, T. , Apter, အေ, Bobes , ဂျေ, Brunner, R. , Cosman, D. , Sisask, အမ်, Värnik, P. , & Wasserman, D. (2015) ။ ဆယ်ကျော်သက်များအကြားရောဂါဗေဒအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 228 (1), 128-135 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.psychres.2015.04.029 Crossref, Medline, Google Scholar
Sumter, အက်စ် R. , Vandenbosch, အယ်လ်, & Ligtenberg, အယ်လ် (2017) ။ Love me Tinder: ချိန်းတွေ့သည့်အပလီကေးရှင်းကိုသုံးရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောတက်ကြွသောလူကြီးများအားလှုံ့ဆော်ပေးခြင်း။ Telematics နှင့်သတင်းအချက်အလက်, 34 (1), 67-78 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.04.009 Google Scholar
Tsimtsiou, Z. , Haidich, အေခ, Kokkali, အက်စ်, Dardavesis, တီ, လူငယ်, K. အက်စ်, & Arvanitidou, အမ် (2014) ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်မှု၏ဂရိမူကွဲ - အတည်ပြုခြင်းလေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါလပတ်, 85 (2), 187-195 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s11126-013-9282-2 Medline, Google Scholar
Tucker, အယ်လ် R. , & Lewis က, C. (1973) ။ maxiumum ဖြစ်နိုင်ခြေအချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိန်း။ Psychometrika, 38 (1), 1-10 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/BF02291170 Crossref, Google Scholar
Twohig, အမ်ပီ, Crosby, ဂျေအမ်, & ကော့, ဂျေအမ် (2009) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ခြင်း - မည်သူသည်ပြproblemနာဖြစ်သနည်း၊ မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ လိင်စွဲ & compulsivity, 16 (4), 253-266 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720160903300788 Crossref, Google Scholar
Velicer, ဒဗလျူအက်ဖ် (1976) ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှု၏ matrix ၏အစိတ်အပိုင်းများ၏အရေအတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း။ Psychometrika, 41 (3), 321-327 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/BF02293557 Google Scholar
Velicer, ဒဗလျူအက်ဖ်, & ဂျက်ဆင်, N. N. (1990) ။ ကဏ္ analysis ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ဘုံဆခွဲကိန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - သင့်လျော်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုရွေးချယ်ရာတွင်ပြissuesနာအချို့ရှိသည် Multivariate အပြုအမူသုတေသန, 25 (1), 1-28 ။ Doi:https://doi.org/10.1207/s15327906mbr2501_1 Medline, Google Scholar
တီဗန်၊ ဘန်ကာ၊ ပီ၊ ပေါ်တာ၊ အယ်လ်၊ မောရစ်၊ အယ်လ်၊ မစ်ချယ်၊ အက်စ်၊ လားပ၊ TR၊ Karr၊ ဂျေ၊ Harrison၊ NA, Potenza, MN, & Irvine, M ။ (2014) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ။ PLoS တစ်ခုမှာ,9(7), e102419 ။ Doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0102419 Crossref, Medline, Google Scholar
ဝူ, အေ, Tao, V. , Tong, K.-K. , & Cheung, အက်စ်အက်ဖ် (2011) ။ တရုတ်လောင်းကစားသမားများအတွက်လောင်းကစားစိတ်ရင်းများ၊ သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ (GMAB) စာရင်းအားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလောင်းကစားလေ့လာခြင်း၊ ၁၂ (၃)၊ ၃၃၁-၃၄၇ ။ Doi:https://doi.org/10.1080/14459795.2012.678273 Google Scholar
လူငယ် K. အက်စ် (2008) ။ အင်တာနက်လိင်စွဲလမ်းမှုအန္တရာယ်အချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်နှင့်ကုသမှု။ အမေရိကန်အပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင်, 52 (1), 21-37 ။ Doi:https://doi.org/10.1177/0002764208321339 Crossref, Google Scholar
လူငယ်, K. အက်စ်, Griffin-Shelley, အီး, Cooper က, အေ, O'mara, ဂျေ, & Buchanan, ဂျေ (2000) ။ အွန်လိုင်းဖောက်ပြန်မှု - စုံတွဲနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်ရှုထောင့်အသစ်နှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်မသန်စွမ်းခြင်း - ကုသမှုနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးဂျာနယ်၊ ၇ (၁-၂)၊ ၅၉-၇၄ ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720160008400207 Google Scholar
Zanetta Dauriat, အက်ဖ်, Zermatten, အေ, Billieux, ဂျေ, Thorens, G. အ, Bondolfi, G. အ, Zullino,,, & Khazaal, Y. (2011) ။ အထူးသဖြင့်ကစားရန်လှုံ့ဆော်မှုသည်များပြားစွာကစားသောအွန်လိုင်းအခန်းကဏ္ role ကစားခြင်းတွင်အလွန်အကျွံပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - အွန်လိုင်းစစ်တမ်းမှအထောက်အထား။ ဥရောပစွဲသုတေသန, 17 (4), 185-189 ။ Doi:https://doi.org/10.1159/000326070 Crossref, Medline, Google Scholar